साहित्यमा रुझेका कुशल बैंकर
नवराज कुँवर काठमाडौं, ३ जेठ
बजारमा देवेन्द्रप्रताप शाहका २ वटा परिचय छन्- कुशल बैंकर र साहित्यकार । बीमा समितिको अध्यक्षदेखि कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकमा सीईओ भइसकेका शाहलाई वित्तीय बजारले ‘कुशल व्यवस्थापक’का रूपमा चिन्छ । कृषि विकास बैंकको सुधारदेखि डुबेको नेपाल बैंकलाई प्राण दिएर अहिलेको अवस्थामा ल्याउनसम्म देवेन्द्रप्रतापको अहं भूमिकालाई सायदै कसैले नकार्ला ।
त्यसो त उनले साहित्यमा पनि एक खालको छाप छाडेका छन् । वास्तवमा उनको इच्छाको विधा बैंकिङ नभएर साहित्य नै हो । २०३८ सालमै कथासङ्ग्रह ‘अपरिचित देश’लाई मौलिक कृतिका रूपमा आमपाठकमाझ पस्किएका उनले २०४५ सालमा संयुक्त उपन्यास ‘अवतार विघटन’ ल्याएका थिए ।
२०५५ सालमा अन्तर्वार्तासङ्ग्रह ‘केही साहित्यकारसित’ नामको किताब निकालेका देवेन्द्रप्रतापले कृषि विकास बैंकमा कार्यरत रहँदाको अनूभूतिलाई ‘आफ्नै परिवेश’ नामक पुस्तकमार्फत् २०५९ सालमा पस्किए । त्यसपछि उनले फुटकर, अनुवादित र सम्पादित कृतिहरू पनि ल्याए । हिजोआज उनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा साहित्यिक रचनाहरूमार्फत् पाठकमाझ आइरहेका छन् ।
१ वर्षअघि नेपाल बैंकबाट अवकास लिएका उनी अहिले नेपालकै ठूलो ग्लोबल आईएमई बैंकको निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् ।
अहिले उनी साहित्यमा अलिक बढी सक्रिय छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा रहँदा व्यस्त समयका बाबजुद उनले साहित्यका लागि कसरी समय निकाले ? सानैदेखि उनको वास्तविक चाहना के थियो ? उनलाई साहित्यप्रतिको मोहले किन छाडिरहेको छैन ? उनीसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा उनको जीवन सङ्घर्ष, लक्ष्य र योजनाबारे चर्चा गरिएको छ ।
आफ्नो सपनाले पूर्णता नपाउँदा धेरै मानिसहरू हतोत्साहित हुन्छन्, जीवनबाट हार खान्छन् र बाँकी जीवनलाई निराशामा होम्छन् । तर, कतिपय मानिस हारे पनि प्रयास गरिरहन्छन् । किनकि, यो संसारमा प्रयास र अभ्यास नै त्यस्तो शक्ति हो, जसले एक दिन जीतको झण्डा फहराएरै छाड्छ ।
देवेन्द्रप्रताप साहित्यकार बन्न चाहन्थे, उनको परिवार उनलाई बैंकर वा पैसा कमाउने जागिरे बनाउन चाहन्थ्यो । देवेन्द्रप्रतापले आफ्नो परिवारको चाहना मार्न सकेनन् सँगै आफ्ना सपनालाई पनि मर्न दिएनन् । अर्थात्, परिवारको चाहनाअनुसार उनी बैंकर बने भने उनको सपनाले उनलाई साहित्यकार बनायो ।
तर, उनले बैंकिङ क्षेत्रमा जति उचाइ लिन सफल भए, त्यति उचाइ साहित्य क्षेत्रमा लिन सकेका छैनन् । किनकि, बैंकिङ जागिर नै यस्तो पेसा हो, जहाँ हरेक मिनेटको अहं महत्त्व हुन्छ । त्यसैले उनले साहित्यलाई पर्याप्त समय दिन सकेनन् । तथापि, आफ्नै सपना भएकाले देवेन्द्रप्रतापले साहित्यिक कलम बिर्सिएका छैनन् । त्यसैले थोरै समय निकालेर भए पनि डायरीका खाली पानामा सहित्यका निम्ति मसी पोतिरहेका छन् ।
धादिङको मैदीमा २००९ सालमा जन्मिएका उनले सानैमा पितृशोक भोगे । आफ्ना अभिभावकसँगै रहेर जीवनका कखरा सिक्ने, उनीहरूको सामीप्यमा रहेर हाँसखेल गरेर बिताउनुपर्ने बाल्यकालमा उनले पितावियोग खेप्नुपर्‍यो ।
समकालीनहरू बुबाको काँध र ढाडमा चढेर रमाइलो बाल्यकाल बिताइरहँदा देवेन्द्रप्रतापले चाहिँ बुबाको शरीरमा दागबत्ती दिनुपर्‍यो ।
त्यसबेला नेपालमा सडकहरूको विकास नभएका कारण धादिङबाट काठमाडौँ आउन ४ दिनको पैदल यात्रा तय गर्नुपथ्र्यो । उनका बुबा लालजंग शाह त्यतिबेला शाही नेपाली सेनाको मेजर थिए भने आमा गृहिणी ।
५ दाजुभाइमध्ये तेस्रो भाइ शाहलाई बुबा मेजर र मध्यम वर्गीय परिवार भए पनि राज खानदानसँग निकट भएकाले कखरा सिक्न घरकै वातावरण पर्याप्त भयो । कक्षा १ देखिको उनको पढाइचाहिँ काठमाडौंको धोबीचौरस्थित एउटा स्कुलबाट सुरु भयो । त्यसबेला उनको परिवार पकनाजोलमा बस्थ्यो । उक्त स्कुलमा ६ कक्षासम्म पढे, त्यसपछि कक्षा ७ को पढाइ काठमाडौंकै जेपी हाइस्कुलबाट भयो । उनको ७ कक्षा सुरु नहुँदै बुबाको देहान्त भएको थियो ।
दाजुहरूको सहयोगमा देवेन्द्रप्रतापले धोबीचौरस्थित स्कुलबाटै २०२३ सालमा सेकन्ड डिभिजनमा एसएलसी उत्तीर्ण गरे । आमाले पनि छोराहरूको पढाइका लागि कम दुःख गरिनन् । आफू कम पढेलेखेकी भए पनि गाउँमै बसेर शाहकी आमाले छोराहरूलाई उचित शिक्षादीक्षाका लागि भरथेग गर्ने अभिभारा पूरा गरिन् । देवेन्द्रप्रताप र उनका भाइहरूको पढाइको सम्पूर्ण अभिभारा जेठा दाजु विष्णुप्रताप शाह र माइला दाजु सुरेन्द्रप्रताप शाहले पूरा गरे ।
सानैदेखि साहित्यमा उनको रुचि थियो । शहरको ‘रेस’मा साहित्यप्रतिको झुकाव उस्तै रहे पनि वास्तविकता त्योभन्दा अलिक पर पुग्यो । किनकि, एउटा साहित्यकार भएरै मात्र जिउन गाह्रो थियो । जिउनका लागि यहाँ रेस जित्नुपर्छ । उनका अभिभावकले पनि उनलाई यो कुरा सम्झाउँथे । त्यसैले उनी साहित्यभन्दा फरक विधामा होमिए ।
त्यति बेलासम्म उनले बैंकर बन्छु भन्ने सोचेका थिएनन् । सबैले वाणिज्यशास्त्र पढेको देखेर उनी महेन्द्ररत्न पब्लिक कलेजमा आईकम भर्ना भए । स्नातक पनि गरे । स्नातकोत्तर पनि व्यवस्थापनबाटै गरेपछि उनले सन् १९८६ मा भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको पढाइ पूरा गरेका हुन् ।
२०२९ सालमा उनी कृषि विकास बैंकमा सेक्सन अफिसरको रूपमा बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरे । त्यतिबेला यस पदका कर्मचारीको मासिक ५ सय ५० रुपैयाँ तलब थियो । उक्त समयमा यो रकम निकै ठूलो मानिन्थ्यो ।
बैंकको सेवा, सुविधाप्रति उनी आकर्षित भए । झण्डै ३० वर्ष उनले कृषि विकास बैंकमा बिताए । त्यसपछि उनले बीमा कम्पनीहरूको नियामक बीमा समितिमा डेढ वर्ष काम गरे र उनी नेपाल बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा नियुक्त भए ।
नेपाल बैंकमा आएपछि उनले आफूलाई एक सफल बैंकर तथा कुशल व्यवस्थापक साबित गरे । किनकि, केही वर्षअघिसम्म ‘रोगी’ भनेर चिनिएको नेपाल बैंकलाई उनले स्वस्थ बनाइदिए ।
साहित्य र देवेन्द्रप्रताप
देवेन्द्रप्रताप शाह एक लेखक तथा साहित्यकार पनि हुन् । साहित्य उनको सपना हो । शाह भन्छन्, ‘बैंकिङ क्षेत्रबाट रिटायर्ड भएपछि साहित्यमा नै सक्रिय छु ।’ बैंकरको रूपमा काम गरिरहँदा पनि उनलाई आफ्नो सपनाले पछ्याउन छाडेको थिएन ।
व्यस्तताका बाबजुद उनी साहित्यबाट धेरै टाढा भने गएनन् । उनले केही कृतिहरू पस्किसकेका छन् । उनले बैंकसँग सम्बन्धित केही फिक्सन र ननफिक्सन पुस्तकहरू लेखेका छन् भने एउटा कथासङ्ग्रह साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित छ । शाह भन्छन्, ‘मेरो रुचि साहित्य हो, म कथा लेखक पनि हुँ । मलाई फुर्सद मिल्नेवित्तिकै म लेख्ने र पढ्ने गर्छु ।’
बैंकिङ क्षेत्रमा नआएको भए साहित्य र पत्रकारिता क्षेत्रमा जाने इच्छा रहेको उनले सुनाए । पत्रकारितामा जाँदा साहित्यमा प्रभावशाली हुने विश्वासले उनी पत्रकार बन्न चाहन्थे । करिब ३ वर्ष त उनले साहित्यिक पत्रकारिता गरे । कृषि विकास बैंकबाटै २-२ महिनामा प्रकाशन हुने ‘समष्टि’ साहित्यिक पत्रिकाको प्रधानसम्पादक भएर उनले काम गरेका थिए ।
कृषि विकास बैंकमा ३० वर्ष काम गर्ने क्रममा भोगेको स्मरणीय अनुभव उनले यसरी सुनाए, ‘कृषि विकास बैंकको स्थिति खासै राम्रो थिएन । असुली कम भइरहेको थियो भने लगानी बढी थियो । निरन्तर यस्तो हुँदा बैंकको हालत खराब भयरहेको थियो । त्यसैले मैले मासिक व्याजको अवधारणा लागू गरिदिएँ । यसपछि ममाथि चर्को राजनीतिक दबाब सिर्जना गरियो । तर, म पछि हटिनँ । फलस्वरूप त्यसको निकै राम्रो असर कृषि विकास बैंकको समग्र स्थितिमा पर्‍यो ।’
‘कृषि विकास बैंक गतिशील र सामान्य वर्गका मानिससँग जोडिने बैंकको रूपमा परिचित छ । कृषि विकास बैंक सिधै गरिब मानिसहरूसँग जाने बैंक भएकाले जनतालाई उधारो सहयोग गर्ने बैंकको रूपमा पनि परिचित छ । यस बैंककोे ऋण उत्पादनमुखी क्षेत्रमा बढी जाने गर्छ’, अर्को अनुभव पनि उनले सुनाए, ‘म त्यहाँ काम गर्दा धेरै गरिबको मुखमा हाँसो पनि दिलाउन पाएँ । हेर्दाहेर्दै उनीहरूको जीवनस्तर उकासिएको पनि देख्न पाइयो । बच्चाबच्ची स्कुलमा पढाउन नसकेकालाई पनि स्कुल पठाउन सफल भइयो । यो सबै कुरा सम्झिँदा रमाइलो अनुभूति हुन्छ ।’
अहिले पूरै विश्व कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ । यसबेला अधिकांश मानिस घरभित्र छन् । देवेन्द्रप्रतापले चाहिँ यो समयलाई पुस्तक पढेर सदुपयोग गरिरहेका छन् । यसबीच धच गोतामेको ‘घामका पाइलाहरू’, एलेक्स वोन तन्जलम्यानको ‘इन्डियन समर’लगायत एक दर्जन पुस्तक पढिसकेको उनी बताउँछन् ।
‘कोभिड‘ १९ को यस महामारीको समयमा घरमै सीमित हुनुपरेको छ । आफ्नो र अरूको ज्यानको सुरक्षाका लागि यो ‘लकडाउन’ आवश्यक थियो । मचाहिँ आवश्यक परेको बेलाबाहेक घरबाट निस्केको छैन, वाक पनि घरमै गर्ने गरेको छु । यस्तो बेलामा सरकारको आह्वानलाई आदरपूर्वक मान्नुपर्ने नै हुन्छ’, शाह भन्छन्, ‘घरमा रहँदाको यो विस्तृत समय कटाउने क्रममा फिजिकल एक्सरसाइज वा घरायसी काम केही बढाउनु, किताब अध्ययन गर्नु वा सिनेमाहरू हेर्नु पनि राम्रा विकल्पहरू हुन् । फिजिकल र अध्ययन त केही न केही बढेको छ ।’
आगामी दिनमा उनी लेखनलाई अझ बढाउन चाहन्छन् । ‘अहिले पुस्तक पढेरै बढी समय व्यतीत भइरहेको छ । मेरो विधा नै साहित्य र दर्शन हो । मेरो सिद्धान्त जसो तसो जनतालाई सेवा गर्ने हो । यसको मतलब म राजनीतिमा जाने होइन । मेरो जागिर नभएको भए पहिल्यैदेखि लेख्ने र पढ्ने काममा व्यस्त हुने थिएँ’, शाह भन्छन्, ‘घरमा सबैखालका किताबहरू छन्, फुर्सदमा अहिले तिनै पढिरहेको छु । आगामी दिनमा लघुकथा, कथा र निबन्ध लेख्ने योजना छ ।’
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ३, २०७७, ०७:४३:००